Wararka Dibadda – Page 14 – Shabakadda Amiirnuur
Maleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo laga qabsaday deegaanno katirsan wadanka Yemen.
Kadib 8 bilood oo guul darro dhan walba ah dhabarka loo saariyay maleeshiyaadka uu taageero isbahasiga Carabta ee Yemen ku duullay ayay ugu dambeyn qabsadeen deegaanno istiraatiiji ah. Wararka ka imaanaya Yemen ayaa sheegaya in maleeshiyaad Maxalli ah oo dhanka cirka ay ka taageerayaan diyaaradaha isbaheysiga Sacuudiga iyo Imaaraatka ay […]
Sawirro: Kenya oo Ka Hadashay Weerarkii Shalay Ka Dhacay Lamu.
Iyadoo maalintii shalay 3 gaari dowladda Kenya looga gubay Lamu ayay saraakiishooda Bolisku sheegayaan in laga dilay labo sarkaal oo la socday gaadiidka dad weynaha oo ay galbinayeen si looga ilaaliyo in Al-Shabaab ay dilaan rakaabka aan muslimiinta ahayn. Larry Kieng oo ah taliyaha ciidamada Booliska xeebta ayaa sheegay in […]